Aragti ururintii ugu horreysay ee laga sameeyey todobo arrin oo Mucaaradka waji gabax ku ridday - Caasimada Online
Home Warar Aragti ururintii ugu horreysay ee laga sameeyey todobo arrin oo Mucaaradka waji...
Aragti ururintii ugu horreysay ee laga sameeyey todobo arrin oo Mucaaradka waji gabax ku ridday
Muqdisho (Caasimadda Online) – Aragti ururintii ugu horreysay ayaa la sameeyey tan iyo markii ay si toos ah isugu dheceen Dowladda Federalka iyo Siyaasiyiinta Mucaaradka ah.
Soomaaliya side uga gudbi kartaa dhibaatooyinka jira ee la xiriira siyaasadda?
“Waxay ku xirantahy in shacabku ay gacansiiyaan dowladda, Siyaasiyiin hadii ay yihiin iyo haddii ay dadweynaha kale yihiin. Waa in ay lashaqeeyaan, haddii ay khalad gasho waa in la saxo oo lagu dhaho khaladdaadkan iska sax, wixii wanaagsanna in dhinacyada laga istaago oo lala qabto.”
Madaxweyne Cabdiqaasim ayaa ka digey in ay sii socdaan isqabqabsiga soo jireenka ah ee rakaadiyey hor-u-socodka dalka isagoona si kulul u dhaleeceyey qorshayaasha ay wadaan mucaaradka haatan ka jira Soomaaliya.
Sidoo kale, Raiisul Wasaarihii hore ee Xukuumaddii Kumeel-gaarka ahayd Prof. Cali Maxamed Geeddi ayaa ugu baaqay Umadda Soomaaliyeed in ay ilaashadaan dowladnimadooda melena iska dhigaan danahooda gaarka ah si looga wada shaqeeyo Soomaaliya oo dib ugu soo laabata booska ay ka daagneyd Afrika iyo caalamkaba.
Maxamuud Cabdi, Mahad Ajuuke, Maxamed Jaamac, Maxamed sheekh Cabduqaadir.Sahro Cabdi iyo Mustaf waa Daawadayaal dhamaantooda waxa ay isku aragti ka yihiin in la taageero Dowlada Madaxweyen Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu Hogaaminaayo oo ay sheegeen in muddo la sugaayay Dowlada ku timid rabitaanka Shacabka iyagoo sheegay in mucaaradka haatan jira uu yahay kuwo dano gaar ah wata.
Balse, hadalkan waxaa si weyn uga soo horjeestay Cabdi Weli oo jooga UK isaga oo yiri: “Dowladdinimadu ma ahan mid ku dhisan qof hadii qof xumaadey ma ahan in la dhaho dowladda baa la duminaya, hadii Farmaajo loo arko in uusan ahayn kii shalay Xildhibaannadu waa badeli karaan.”
Hadalkan oo ay si weyn u dhaliileen qaar ka mid ah ka qeyb-galayaasha dooda oo sheegay in ay Soomaaliya aysan ku jiri Karin maalin walba in hoggaanka loo badalo sababo ay ka muhiimsantaahy danta guud iyo wax qabadyada kale ee ay samaysay dowladdu.
“Mucaaradku waa in ay noqdaan dad wadaniyiin ah oo ku dadaalaya horumarka dalka daacadna ay ka tahay sixidda iyo toosinta dowladda kana dheeraadaan xifaaltanka iyo weerarka ay ku hayaan dowladda.”ayey kaga jawaabtay Sahra Cabdi oo barnaamijka ka qeyb qaadatay.